Verizon သည်ယနေ့ကောင်းသောအမှုကိုပြုခဲ့သည်။ AT&T ကသိပ်မကောင်းဘူး Martech Zone
Verizon သည်ယနေ့ကောင်းသောအမှုကိုပြုခဲ့ပြီ။ AT&T သိပ်မကောင်းဘူး…
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 19, 2007 သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 24, 2014 Douglas Karr
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုစားသုံးသူရေးရာကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အနိုင်ကျင့်သည့်တရားဟောဆရာအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ငါစိတ်ပျက်မိအောင်ကုမ္ပဏီကိုအရှက်ရစေတာသိပ်တော့မများပါဘူး။ ယခင်ပို့စ်တွင်, ငါ AT & T ကဆော နှင့်ရွေ့လျားမှုအလုပ်အမိန့်အပေါ်တစ်ခုတည်းကို item ဖြည့်စွက်ရန်သူတို့၏အရည်အချင်းမရှိတဲ့စွမ်းရည်ကိုအသေးစိတ်။ ဒီကနေ့မှာသူတို့ကသူတို့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုပေးလိုက်တယ် - သူတို့မတော်တဆထည့်မိတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်လိုက်ပြီးကုမ္ပဏီရဲ့ဖုန်းငွေဒေါ်လာ ၅၀၀ ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်။ ငါဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူမပျော်ခဲ့ - ငါတို့သဘောတူညီချက်ကျော်ဒေါ်လာစျေးထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်ဂုဏ်သတင်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သူတို့ကကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်၊
Verizon; အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါ့မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်။ ကျွန်တော်ဒေါ်လာ ၄၀၀ + ဖုန်းငွေတောင်းခံလွှာကိုရခဲ့တယ်။ Ouch! မိနစ် ၃၀ ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏အမြင့်ဆုံး၊ အမြင့်ဆုံး၊ မည်သည့်အရာနှင့်မည်မျှရှိသည်ကိုတွက်ချက်ရန်အင်တာနက်ကိုမိနစ် ၃၀ သုံးပြီးပြီးနောက်မိနစ်များနှင့်ဖုန်းနံပါတ် ၃ ခုမှတစ်ခုစီသည်မည်သည့်အရာအတွက်တာဝန်ရှိသည်ကိုငါကြိုးစားရှာဖွေခဲ့သည်။ ရှင်းပြချက်တောင်းခံရန် Verizon ထံအီးမေးလ်တစ်စောင်ချလိုက်သည်။
ငါ့သမီးအတွက်ဖုန်းထည့်ပြီးတဲ့နောက်ပြissueနာကကျိန်းသေမှားသွားတာကြောင့်ပဲ။ ငါ့ကိုပြန်ရေးတဲ့သူ Renae ကစွဲချက်အားလုံးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့တယ်။ ငါသတိထားမိပြီးမှ ကိုပြု လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်အစီအစဉ်ကိုချိန်ညှိခဲ့သည်၊ သူသည်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်သို့ဒေါ်လာ ၁၀၀ ချေးငွေထည့်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Verizon!
ငါသည်လည်းငါထည့်သွင်းရန်ရှိသည် VZ Navigator ကိုလက်လှမ်းမမှီပါဟုမုန်းပါသည် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် Verizon အကောင့်အပြင်ဘက်တွင်ရှိသော်လည်းအမှန်တကယ်ကားသွားလာမှုသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။ ၀ ယ်ရန်မလိုပါ GPS စနစ် ဤဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းတို့ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ ငါ့မှာ Razr ရှိတယ်၊ ငါဖုန်းကိုခရီးသည်ထိုင်ခုံပေါ်မှာတင်ပြီးညွှန်ကြားချက်တွေကိုအပြည့်အဝကြားနိုင်ပြီ။
Tags: at & tVerizon
Douglas Karr Wednesday, September 19, 2007 Friday, October 24, 2014
ကျွန်ုပ်၏ Blogging ကတ်များရောက်ရှိပါပြီ
B3B Blogging အတွက်သတိရရမည့်အဓိကအချက် ၃ ချက်